Doorashada xubnaha Aqalka Sare oo dib udhac ku yimid - Tilmaan Media
Waxay maanta ku beegantahay 01/12/2020 oo ah maalinkii loo asteeyay in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay kabilaabato doorashooyinka xubnaha kamid noqon doona Aqalka Sare ee Baarlamanka Federaalka Soomaaliya.
Heshiiskii magaalada Muqdisho kudhex maray Dowladda Federaalka, Dowladaha Xubnaha ka ah iyo Gobolka Banaadir ayaa dhigayay in maanta doorashadaasi bilaabato. Laakiin waxaa muuqata in jadwalka doorasho ee lagu heshiiyay dib u dhac ku imaanayo.
Illaa iyo hadda ma jirto tallaab loo qaaday dhaqan-gelinta jadwalkaasi oo lagu caddeeyey in doorashada aqalka sare ay dhaceyso 1- da illaa 10-ka bisha December.
Dib udhaca ayaa loo aanaynayaa khilaafka u dhaxeeya Dowladda Federaalka, Mucaaradka iyo Dawladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka qaarkood ee ku aadan guddiyada doorashooyinka. Puntland iyo Jubaland ayaan wali soo magacaabin xubnaha guddiga doorashooyinka.